At long last the date of this blog's retirement is here!!!
On December 18, 2008!!!
Posted by Sai Linn Thu at 6:03 AM2comments
Mia Rose - Hold Me Now
Posted by Sai Linn Thu at 8:10 AM0comments
တစ်ခါတစ်ခါတွေးရင်းနဲ့ ရူးချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်...တကယ်တော့ ကိုယ်အဆင်ပြေနေတဲ့ နေရာက ကိုယ့်အတွက် အကောင်းဆုံးပါပဲ...ဒါပေမဲ့လည်း လောကကြီးက ကိုယ်ဖြစ်ချင်သလိုမှ မဖြစ်တာ... သူ့ဟာသူဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်နေတဲ့ လောကကြီးထဲမှာ ကိုယ်က အဆင်ပြေအောင် နေသွားရမှာ...ဆရာတော် ဦးဇောတိက ဟောသလိုပေါ့...
တစ်ခါတစ်ခါ စိတ်ပေါက်လာတော့လည်း အဲဒီလို စာပေလေးဖတ်ထားတာတွေကလည်း စိတ်ကိုထားတတ်အောင် သင်ပေးနေသလိုပါပဲ...
Posted by Sai Linn Thu at 7:04 AM 1 comments
sho run လို့ မရိုက်ဘဲ haha လို့ ရိုက်လည်း တူတူပါပဲ How to ?
အပျင်းပြေပေါ့...show running-config လို့မရိုက်ဘဲ haha (နမူနာ) လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ running-config ကို ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်...
testrouter(config)#alias exec haha show running-config
exit ထွက်ပြီး haha လို့ ရိုက်လိုက်တာနဲ့ running-config ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်...hehe လို့ရိုက်တာနဲ့ configure terminal ထဲကို ရောက်ချင်ရင်ရော...
testrouter(config)#alias exec hehe configure terminal
Posted by Sai Linn Thu at 12:06 AM0comments
Determining Host Location by MAC Address
Network မှာ ဘယ် host က ဘယ် switch ရဲ့ ဘယ် port (interface) မှာ connect လုပ်ထားသလဲ သိချင်ရင်
show mac address-table ကို သုံးပြီး ရှာကြည့်ပါ...show mac address-table နဲ့ မရရင်
show mac-address-table ကိုသုံးပါ...mac နဲ့ address ရဲ့ကြားမှာ hypen(-)ပါတာ မပါတာက IOS version ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်...
Posted by Sai Linn Thu at 11:31 AM0comments
- advertisements occur every 60 seconds
- works at Layer2 (Data Link Layer)
- sents as multicast, using destination MAC 01:00:0c:cc:cc:cc
- show cdp neighbors detail
Posted by Sai Linn Thu at 11:24 AM0comments
enable password နဲ့ enable secret အတွက် မှတ်သားစရာ
- ပထမဆုံးအဆင့် အနေနဲ့ Router ကို ဘာ enable password မှ ပေးမထားပါဘူး...enable လို့ရိုက်ပြီး router ထဲကို ၀င်လိုက်ပါပြီ...
testrouter con0 is now available
- နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ router ကို enable password ပေးပါမယ်...password က CcNa ဆိုပါစို့...
testrouter(config)#enable password CcNa
- Password ပေးပြီးပါပြီ...Configuration မှာ verify လုပ်ကြည့်ပါမယ်...
testrouter#sho run | inc enable
- Router ကို logout လုပ်ပြီး enable password ကို စမ်းကြည့်ရအောင်...
Password ကို CcNa ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါမယ်...
Password: (CcNa ဟုရိုက်ရန်)
- နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ enable secret ပေးကြည့်ရအောင်...Ccnp လို့ပေးပါမယ်...
testrouter(config)#enable secret Ccnp
-Config ကို verify လုပ်တဲ့ အခါမှာ ခုလိုတွေ့ရပါမယ်...သတိထားမိတာက enable password ပေးတုန်းက CcNa ဆိုပြီး configuration မှာ ပေါ်ပေမဲ့ enable secret ကျတော့ Ccnp လို့ပေးပေမဲ့ enable secret5$1$E/Vg$I.rYbR0rAyKN7LLWJw8rM1 ဆိုပြီး ပေါ်တယ်...အဲဒါ encrypt လုပ်ထားတာ...security reason တစ်ခုပါ...
enable secret5$1$E/Vg$I.rYbR0rAyKN7LLWJw8rM1
- နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ Router ကို logout လုပ်ပြီး enable mode ကို ၀င်ကြည့်တဲ့အခါ ဘယ်password နဲ့ဝင်ရမှာလဲ...CcNa လား..Ccnp လား...တနည်းအားဖြင့် enable password လား enable secret လား....
enable secret ဖြစ်တဲ့ Ccnp နဲ့ဝင်မှ ရပါမယ်...enable password ဖြစ်တဲ့ CcNa နဲ့ ၀င်လို့မရတော့ပါဘူး...
Password: (CcNa လို့ရိုက်ရင် ၀င်ခွင့်မပေးပါဘူး...Ccnp လို့ရိုက်မှသာ ၀င်လို့ရပါမယ်)
- ဒီတော့ enable secret ကို အသုံးပြုဖို့ recommend ပေးပါတယ်...
- ခုဆိုရင် configuration မှာ enable password CcNa လို့ပေါ်နေပါတယ်...အဲဒါကို CcNa လို့မပေါ်စေဘဲနဲ့ Type7Password ဆိုပြီး encrypt လုပ်ချင်ရင် service password-encryption ဆိုတဲ့ command ကို သုံးရပါမယ်...
-အဲဒီနောက် Configuration ကို verify လုပ်ကြည့်ရင် အခုလို အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်...enable password70528052120...
enable password70528052120
- သို့ပေသော်လည်း အဲဒီ enable password70528052120 ကို Boson's ရဲ့ Getpass ဆိုတဲ့ software ကို အလွယ်တကူသုံးပြီး crack လိုက်လို့ရပါတယ်...ပုံမှာကြည့်ပါ...
- နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Router ရဲ့ config mode ထဲကို ပြန်ဝင်ပြီး no service password-encryption လို့ ပြန်ပြောင်းကြည့်သော်လည်း enable password က CcNa ဆိုပြီး ပြောင်းမသွားဘဲ Type7password အနေနဲ့ပဲ အခုလို enable password70528052120 တွေ့နေရမှာပါ...
Posted by Sai Linn Thu at 4:45 PM0comments
Labels: CCNA, CCNA Security, Cisco
CCNA Security (13)
Favourite Articles (3)
Studying English (3)
sho run လို့ မရိုက်ဘဲ haha လို့ ရိုက်လည်း တူတူပါပဲ...
enable password နဲ့ enable secret အတွက် မှတ်သားစရာ...
Into the world of CCNP အဟဟဟ Are you serious?
Chris Bryant ရဲ့ CCNA Study Guide ( Book Review )
IDS and IPS Network Placement
Applying ACLs to Router Interface
What is Endpoint Security? (CCNA Security Chapter ...